उपत्यकामा घट्दै कोरोना संक्रमण, एकैदिन ७ सय ६४ संक्रमित फेला, कहाँका कति ? Canada Nepal
उपत्यकामा घट्दै कोरोना संक्रमण, एकैदिन ७ सय ६४ संक्रमित फेला, कहाँका कति ?
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बिहिबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ७६४ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ५४० जना, ललितपुरका १२५ जना र भक्तपुरका ९९ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ७४९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ६ लाख १ हजार ६ सय ८७ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) १७ हजार ७ सय १४ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार २ सय ९३ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ५ लाख १५ हजार ५९१ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट निको हुने दर ८५.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार २ सय ३८ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जेठ २७, २०७८ बिहिवार १९:४५:०२ बजे : प्रकाशित